Dowlada Qatar oo go’aansatay in ay ka baxdo Ururka Wadamada Saliida Dhoofiya ee OPEC… – Hagaag.com
Dowlada Qatar oo go’aansatay in ay ka baxdo Ururka Wadamada Saliida Dhoofiya ee OPEC…
Posted on 3 Diseembar 2018 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Dowlada Qatar ayaa ku dhawaaqday in ay go’aansatay in ay ka baxaan Ururka Waddamada Saliidda Dhoofiya ee (OPEC) laga bilaabo bisha January ee soo socda sanadka 2019, sidaasina waxay ku wargelisay Ururka.
Shir jaraa’id oo maanta oo Isniin ah qabtay Wasiiru dowlaha Batroolka ee Qatar Saad Al-Kaabi ayaa sheegay in dalkiisa uu qaatay go’aankan kadib markii ay fiiriyeen istaraatijiyada muddada dheer, wuxuu farta ku fiiqay in go’aanka uu sabab u yahay dhinaca farsamada iyo istratijiyada ee ma ahan mid siyaaadeed.
Kaabi ayaa sheegay in Doha ay ku wargelisay go’aanka ka bixitaankeeda Ururka OPEC maanta, wuxuu ku tilmaamay go’aanka in uusan aheyn mid fududaa kadib markii Qatar ay xubin ka aheyd Ururka muddo 57 sano ah. Wasiirka ayaa tilmaamay in shirka OPEC ee soo socda uu noqonayo kan ugu dambeeyey oo dalkiisa ka qeyb galo.
Wasiirka Qatar ayaa sheegay in dalkiisa uu aaminsan yahay in ay muhiim tahay in uu diiradda saaro badeecadaha aasaasiga ah ee uu iibiyo sida gaaska dabiiciga ah. Waxa uu sheegay in Qatar ay ku dhawaaqi doonto iskaashi weyn oo caalami ah bilaha soo socda.